Su,aalaha Dadweynaha in Laga Jawaabo oo la Qanciyo waa Muhiim – Rasaasa News
Jun 29, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
Waxaanu Qoraalo aad u badan ka helaa maalin walba akhristayaalka bogga rasaas.com, hadaba waxaa kulan ka yeeshay qoraalada badan ee aanu helo maalin walba, gudiga maamulka ee rasaas.com. Waxana la go,aamiyey in aan la tuurin fikirka dadweynaha Akhrista warbixinada boggan, waxaa kale oo la go,aamiyey in aan la soo dhajinin magaca dadka fikirka soo jeediya.
Waxaanu idiin soo xuli doonaa kuwa aanu isleenahay faa,iido ayey u lee yihiin dadweynaha akhrista boggan iyo bogga laftiisaba.
Akhriste nal soo xidhiidhay ayaa waxaa uu na soo waydiiyey?
GARANAY QABYAALADA AAD KU SHEEGTEEN KOOXDAN,LAAKIIN WAXAA YAABLEH QABYAALADA AAD IDINKU NAFTIINU SAMAYNAYSAAN EE AH KOOXDAN BUDHCADA AH EE MINASSOTA, WAXAA MADAX U AH HAWEEYA XIRSI MAHAD IYO MAXAMED AXMED DAAHIR WALINA MA AANAN ARAG IDINKA OO SOO HADAL QAADAYA SABABTUNA WAA REER WARFAA MIYAANAN LOO ARKAYN ARINTA?.
KOOXDA SANDIEGO AMA USA OO DHANA WAXAAA MADAX U AH CIBAADO XIRSI MAHAD MAXAA IYANA DANBIGA KA REEBAY?
HADAAD LEEDIHIIN WAA GABDHO OO DHAQAN UMA LAHIN IN GABDHAHA WAX LAGA SHEEGO CAMBARO MIYAYNA GABADH AHAYEN?
WAAD MAHAD SANTIHINN
Su,aasha waxaa ka Jawaabay H.Magan
Waan u mahad celinayaa akhristaha bogga. Akhristow sidaa aad ugu qirtay in ay qabyaalad ku dhaqanto kooxda Jwxo-shiil ayey umada oo dhan u aragtay, marar badan ayaana loo sheegay in ay sharciga raacaan wayna diideen. Waxaa kolkaa lama huraan noqotay in la raaco qaaciidada xigmada Somaliyeed [qaniinyo ayaa qaniinyo kaa fujisa] oo ah mida kaliya ee uu garanayo Jwxo-shiil, si halganka marinkiisa loo mariyo, loona kiciyo xubnaha Jwxo ee aan iyagu hadli karin ee isaga uun wax ka dhawra.
Waxaan filayaa in aad waxbadan ogtahay, cadaaladuna waa mid u wanaagsan aadamaha, si uu u wada noolaado waxana u qabsado, hadii la waayana waxaa soo baxa wax kasta oo xumaan ah, waana mida aan maanta wada aragno.
Waxaan wax la halmaami karo ahayn in Jwxo-shiil uu god ku guray rag badan oo halganka tiir u ahaa inaga oo arkayna, waadna ogg tahay oo wuu dhuumanayaa wuxuuna la dhuumanayaa dambiga uu ka galay halganka iyo ummada Somalida Ogadeeniya. Waana wax laga xishoodo in ummad halgan ku jirta oo wali gacan gumaysi ku jirta in ay hoysiiso dambiile halgankoodii dhibaateeyey. Qaar inaga mida ayaa doonaya in ay difaacaan oo isaga mooyee aan halganba dan ka lahayn, cajiib.
Kooxda Mineapolis iyo qoraaladu, waxaa ay wadaan sida ay ila tahay in ay sheegaan dambiga halganka laga galay, waxaanan hubaa in ay jirto cid bartay qabyaaladan ilaa cidaas ay soo af jarto dhibaatada ay samaynayo Mineapolis way sii wadi hawlaha sixitaan ee laga aamusay iyo garsoorka.
Waxaa Jira xubno badan oo Jwxo ah oo aan ka soo bixin xilkii ay ummada u hayeen ee halganka, waana lala xisaabtami kolka ay timaado iyo wakhtigeeda. Waxaanse xubnaha la sinayn kuwa aad u afka dheer ee aad moodo in ay halganka ummada ka xigaan.
Labadan ruux ee aad magacowday, balan waxaa ah hadii na looga soo sheego in ay far dheeraatay ku yihiin halganka iyo sixitaankiisa in aanu galka ka mudhxinaa oo ayna dib oo dambe bulshada u soo dhexgalin.
Erayga Qabyaalada ee aad magac qaaday waa faladh [jilib] ka mid ah beelaha dega dhulka Somalida Ogadeeniya bogganina waa ka weyn yahay bogg beel u adeega, balse waxaa uu u adeegaa ummada Somalida Ogadeeniya jecelna wanaaga cid alaale cidii xuma samaysana abaalkeed ayuu ka waraabin cida ay doonto ha ahaatee.
Sandiego waxaa masuul ka ah muwaadiniin Maraykan ah, Gabadha aad sheegtayna waxaanu ognahay in ay tahay xubin Jwxo ah;waxaase qoraalkaaga ka muuqata in ay dambiile tahay, waana baadhaynaa hadii ay ka mid tahay dadka ku sifoobay dunuubta qaran waanse ognahay in ay tahay qawda maqashii waxse haw qaban oo lafteedu khalad ah oo ay waliba Kitaab gacanta saartay.
Dhaqanka reer miyiga ee Somalida ayaa iska bartay waa gabadh, arintaas oo aad meel ka dhac ugu ah haweenka Somalida; haweenku masuul way noqon karaan xuquuqda uu ragu lee yahay ayey lee yihiin, waxay gali karaan dunuub waxaana lagu xukumi rag iyo haweenba hal sharci.
Gabadha ugu dambaysa aniga oo H. Magan ma anaan arag meel dambi ay gashay wax laggaga qoray wayse dhici kartaa in qoraal uu wariye qoray lagu halqabsaday, hadii ay khalad u aragtayna waanu ka raali galinaynaa.
Waxaan filayaa in aan akhristow ku siiyey Jawaab waafi ah.